शहीद हीरालाल स्मृति तेस्रोगोल्डकप फुटबल खेल शुरु – Nijgadh Fast Track News, Airport News and Latest News of Nijgadh Bara Parsa Rauthat & Middle Terai Region of Nepal::: Nijgadh.com Nijgadh Samachar Bara First online News
शहीद हीरालाल स्मृति तेस्रोगोल्डकप फुटबल खेल शुरु
२०७२, ९ फाल्गुन आईतवार ०४:३९ February 21, 2016 Nijgadh.com Comments
जीतलाल श्रेष्ठ, ९ फागुन÷
निजगढमा शनिवारदेखि शुरु भएकोशहीद हीरालाल स्मृति तेस्रो गोल्डकप फुटबल प्र तियो गिताको पहिलोखेलमा आरएफसी चितवन विजयी भएको छ ।
निजगढ युवा क्लबलाई ० का विरुद्ध १ गोल गरी आरएफसी चितवन विजयी भएको हो। खे लमा पहिलो हाफको अधिकांश समय निजगढ युवा क्लबको पकड रहे पनि दोस्रो हाफलगत्तै चितवनका जर्सीनं. ५ का सुनील श्रेष्ठलेगोल गरे। सोही गोल चितवनका लागि निर्णायक साबित हु न पुग्यो । पछिल्लो हाफमा निजगढ युवा क्लबले पटक÷पटक गरेकोप्रयास गोलमा
परिणत हु न नसक्दा पराजित हुनु पर्यो । निजगढ क्लबले एकै समय ३ पटक कर्न र प्रहार गर्ने अवसर पाए पनि गोल भने गर्न सके न । आजको म्यान अफ दि म्याच
चितवनका जर्सीनं. २३ का लीलाबहादुर थापा घो षित भए । प्र तियो गितामा ११ टिम सहभागी हुने जनाइए पनि ८ टिम मात्र सहभागी भएको आयोजक क्लबले जनाएको छ । आइतवारको खेल आयोजक न्यु जनजागृ ति यु वा क्लब निजगढ र चपु र ११ रौ तहटबीच हु ने प्र तियो गिता आयो जक क्लबका सचिव पुरुषोत्तम भट्टराईले बताए । खेलका मुख्य रेफ्री रियाजुल इस्लाम, सहायक रेफ्री दधीर क्षत्री, कृष्णमणि चौधरी, सानु मगर रहेका छन् । प्रतियोगिताकोसम्पू र्णखेल निजगढ नगरपालिका–५ स्थित बागदेव खेल मैदानमा हुने जनाइएको छ ।
प्रतियोगिता उद्घाटन बाराका स्थानीय विकास अधिकारी नारायण प्रसाद पाण्डेले रेफ्रीलाई खेल मैदानमा फुटबल हस्तान्तरण गरी गरे का थिए । मन्तव्यका क्रममा प्रमुख अतिथि पाण्डेले फुटबल खेल सबै का लागि रो चक र मन रञ्जनपू र्ण हुने बताउदै फुटबल खेलले लामो समयपछि पछिल्लो दु ईपटक राष्ट्र को शान उच्च बनाएको स्मरण गराउदैजिल्ला विकास समितिलेअन्य खेलकृुदका साथै फुटबलको विकास, विस्तारकोलागि उच्च प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरे। प्र तियोगितामा विजे ता टिमलाईनगद रु ५० हजार र उपविजे तालाई रु २५ हजार, मेडल, ट्रफी प्रमाणपत्र प्रदान गरिने आयोजक क्लबले जनाएकोछ । त्यसै गरी सर्वा ेत्कृष्ट खेलाडीसहित अन्य विधामा पनि आर्कषक कप तथा मेडल रस्कार राखिएको छ ।
द अननोन ब्याडले ‘भ्यालेनटाईन डे’ मा नचाए तन्नेरीहरुलाई
नेपाली द्वारा जापानमा आत्म हत्या
२०६९, २६ कार्तिक आईतवार ०४:०४ January 5, 2013 Nijgadh.com
२०६९, १२ पुष बिहीबार १०:१५ January 5, 2013 Nijgadh.com